Ezi zintandathu zokusebenza zokuqubha ze-Android | I-Androidsis
UAron Rivas | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
Omnye wemidlalo ethandwa kakhulu kwihlabathi, ngaphandle kwamathandabuzo, kukudada. Kuninzi kangangokuba ibandakanyiwe kwimidlalo yeOlimpiki kunye nazo zonke iintlobo zokhuphiswano oludumileyo, kunye nokuba yinto eyenziwa ngokubanzi kuyo yonke indawo. Kwaye kungenxa yeso sizathu, sikubonisa le posi, enye apho uya kufumana uluhlu lwezicelo ezininzi eziza kukunceda ufunde ukudada nangakumbi malunga nomdlalo wamanzi odumileyo.
Kule nkqubo yokudibanisa uya kuyifumana Iinkqubo ezi-6 zokubhukuda ezilungileyo ze-Android Oko kukuthi namhlanje kwiVenkile yokudlala kaGoogle. Zonke ezi zidweliswe ngezantsi zikhululekile kwaye zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokubhukuda, izifundo zokuqubha kunye nokunye.
Apha ngezantsi sikulethela uthotho lwee-6 zezona zixhobo zibalaseleyo zokudada zeefowuni ze-Android. Kubalulekile ukuba uqaphele, njengoko sihlala sisenza, ukuba zonke onokuzifumana kule post yokudibanisa zisimahla. Ke ngoko, awuzukunyanzela ukuba wenze nayiphi na imali ukuze ufumane enye okanye zonke. Nangona kunjalo, enye okanye ezingaphezulu zinokuba nenkqubo yentlawulo encinci encinci, enokuvumela ukufikelela kumxholo ongaphezulu ngaphakathi kubo, kunye neprimiyamu kunye neempawu eziphambili. Ngokufanayo, akuyomfuneko ukwenza nayiphi na intlawulo, kufanelekile ukuphinda. Ngoku ewe, masifike kuyo.
1 Umqeqeshi wokuqubha-Uqeqesho p. Ukuqubha kunye neTriathlon
2 I-SwimUp-Uqeqesho lokuqubha
4 I-SwimtoFly -Funda indlela yokuqubha, ukufundisa, ukufumana uTitshala
5 Ibala lokuqubha | Qala ukuqubha namhlanje!
6 Ukuqubha Istopwotshi
Umqeqeshi wokuqubha-Uqeqesho p. Ukuqubha kunye neTriathlon
Ukuqeqesha, ukuziqhelanisa nokufunda nokudada, Umqeqeshi wokuqubha-Ukusebenza iphe. Ukuqubha kunye neTriathlon yeyona app ifanelekileyo kwaye yenye yezona zinto zibalaseleyo esinokuzifumana kwiVenkile yokudlala yee-smartphones ze-Android. Ngesi sixhobo sinokuphucula kulo mdlalo ngezicwangciso zoqeqesho ezikrelekrele nezenzelwe umntu kwinqanaba ngalinye kunye nomsebenzisi.
Lolu hlelo lokusebenza lusebenza njengomqeqeshi omnye ukukunceda ulungiselele i-triathlon okanye imicimbi yokubhukuda. Phucula ubuchule bakho kwaye uqubha ngemiyalelo kunye nokuzilolonga ekufanele kukwenzele kona, okuninzi nokulula ukuluqonda. Ngaxeshanye, kunceda ugcine imeko yakho yomzimba ikwimo entle kwaye, ukuba awunayo, yifumane. Esi sisixhobo esilungileyo sokunciphisa umzimba, njengoko unokusebenzisa iingcebiso kunye nokusebenza ngokubhukuda ukutshisa amanqatha kunye nokufumana ubunzima obulungileyo.
Akhawunti imithambo engaphezu kwama-40 yabantu abadada, iindlela ezine zokudada onokukhetha kuzo (zijikeleze, ubuchule, ukuphefumla kunye nokuxhathisa) kwaye ikuvumela ukuba urekhode inkqubela yakho kunye neeseshoni zoqeqesho, kunye nokwenza iiseshoni zoqeqesho lokubhukuda kunye nokwabelana ngokuzilolonga nge-imeyile. Oku kunye neminye imisebenzi ibandakanyiwe kuhlobo lokuQubha lokuQeqesha, yona yasimahla.
Umqeqeshi wokuqubha ngeGolide yinguqulo ehlawulelweyo kwaye le igqityiwe ngakumbi, ineemithambo ezingaphezu kwama-240 zokuqubha kunye neetriathletes, kungoko ke kulunge ngakumbi ekusebenzeni okungaphezulu, okwenza ukuba ufumane iziphumo ezingcono. Ukongeza, iza neerekhodi zexesha lokuqubha lomgama we-50 m, 100 m, 200 m kunye ne-400 m, phakathi kweminye imisebenzi.
Umthuthukisi: Umngeni weKaul
I-SwimUp lolunye usetyenziso oluhle lokubhukuda lwe-Android olubonakaliswa ngokunikezela izicwangciso ezahlukeneyo, iiseshoni kunye neengcebiso zokudada ukuphucula ubuchule kunye neziphumo kukhuphiswano lomgama omde kunye nexesha. Zininzi iingcebiso zokudada, iindlela, uhlalutyo oluhle kunye nethiyori ejolise ekuphuculeni isicwangciso sakho sokufunda.
NgeSwimUp uneendlela ezine zokubhukuda, zonke ezisebenzayo, kwaye zezi zilandelayo; Unokukhetha le uyifunayo kunye neyona ilungele eyona nto uyikhangelayo kunye nemeko okuyo ngoku:
Impilo-ntle: iiseshini zokuqubha ezilula (kucetyiswa abaqalayo kunye nabantu abafuna nje ukudada ngokuzonwabisa)
Inkqubo: ukufezekisa iintshukumo zokubhukuda kunye nezakhono (kucetyiswa kubantu abanamava ngaphandle kwendlela yokudada)
Ootitshala: ukuzivocavoca okunyanzelekileyo kunye noqeqesho lwababhukudi abanamava (kucetyiswa ukuba abadadi abaqeqeshiweyo abafuna ukuphucula ukusebenza kwabo kukhuphiswano)
Triathlon: imizila kunye nezicwangciso zoqeqesho olukhethekileyo lokubhukuda eTriathlon (kucetyiswa oonxantathu abafuna ukufumana iziphumo ezingcono kolu khuphiswano lwe-triathlon)
Uhlengahlengiso ngalunye kunye noqeqesho lwesicwangciso luhlengahlengiswa kwiimfuno zomsebenzisi, into eyenza ukuba ibe yenye yezona zicelo zoncedo kakhulu ekuphuculeni nasekufundeni iindlela zokudada kumachibi nakumanzi avulekileyo. Ukongeza, iza neevidiyo zemfundo ezichazayo ezikufundisa yonke into oyifunayo malunga nemidlalo yamanzi, inkcazo eneenkcukacha zazo zonke iindlela zokuqubha ezinjengebhabhathane, ifreyim, isifuba, ukubuyela umva nokunye okuninzi, kunye neminye imisebenzi kunye neempawu.
Enye yeendlela ezilungileyo zokufunda ukubhukuda kunye nokuphucula iindlela zokuqubha kukufundisa iividiyo zokubhukuda. GoSwim uyazi kwaye ke ngoko Ine-repertoire yeevidiyo zemfundo eziya kukunceda ufezekise iziphumo ezingcono zokubhukuda echibini nasemanzini avulekileyo, kunye nendlela yokufundisa ekulula ukuyiqonda nokuyifanisa, zombini iingcali kunye nabaqalayo kunye nee-novice. Le yinkqubo yevidiyo ye-USA-Swimming, ke inokunikezela kakhulu.
Kukho malunga ne-4 lamawaka evidiyo enomdla ngokwenene ebonisa ukuba ungafunda njani, uphucule kwaye ugqibelele iindlela ezahlukeneyo kunye neendlela zokuqubha ezaziwa kakhulu kwaye zisetyenziswa kukhuphiswano. Ayinamsebenzi ukuba injani inqanaba lakho; ngeGoSwim kulula ukuyifunda, nangona kuya kufuneka uthathe ixesha lokubona wonke umxholo ekufuneka uwunikile, kuba ubanzi kwaye wahlukahlukene.
Kwiveki nganye kukho umxholo ohlukileyo, apho iindlela ezahlukeneyo zokufunda zicetyiswa kwiindlela ezininzi ezinje ngesingqisho se-flutter kunye nezinye. Izihloko zikhatshwa yividiyo emfutshane echazayo malunga nazo. Ezi zigubungela iindlela ezine zokudada ezinjengokukhasa ngaphambili, ukubuyela umva, isifuba kunye nebhabhathane.
Unokuzilolonga okuninzi kunye nokusebenza ukwenza nale appIkwasebenza njengesixhobo esisebenzayo sokufundisa ngaphandle kwethiyori engafunekiyo, ethi ngamanye amaxesha yenze ukuba inkqubo yokufunda ifideke kuninzi. Ikwanayo nesixhobo sokubala seSEI esinokusetyenziselwa ukubala amanqaku eStroke Efficiency Index.
Umthuthukisi: Yiya kwiimveliso zokuqubha
I-SwimtoFly -Funda indlela yokuqubha, ukufundisa, ukufumana uTitshala
I-SwimtoFly yinkqubo ebalaseleyo yokubhukuda ye-Android kuba inika iividiyo ezichazayo ezingapheliyo njengesifundo esikufundisa ukudada okanye, ukuba sele uyazi, indlela yokuphucula isitayile sakho. Inikezelwe kubasebenzisi abasisiseko kunye nabaqalayo kunye neengcali kunye neengcali, yiyo loo nto ke ihlelwa njengenye yezona zisebenza ngokufanelekileyo kwinkalo yesifundo. Nangona kunjalo, iividiyo esele zinazo zifumaneka ngesiNgesi kuphela, nangona uninzi lwazo lunokuqondwa ngokuzibukela, zinikezwe ukuba zingaba njani.
Kukho izifundo ezi-5 kwi-SwimtoFly app:
Ungagcina umkhondo wokugqitywa kweseshoni nganye emva kwesifundo ngasinye sokubhukuda kwi-Intanethi, kunye nokurekhoda umgama wokubhukuda kunye nexesha lokuqubha elifezekisiweyo ukuphucula isantya sokuqubha.
SwimtoFly🏊 Funda ukudada, ukufundisa, ukufumana utitshala
Umthuthukisi: SwimtoFly Pte. Ltd.
Ibala lokuqubha | Qala ukuqubha namhlanje!
Ukuba ufuna enye into onokukhetha kuyo echazwe apha ngasentla, I-Arena SWIM yindlela elungileyo yokufunda nokuphucula indlela odada ngayo kumadanyana kunye namanzi avulekileyo. Esi sicelo sikuvumela ukuba wenze uqeqesho olufanelekileyo kunye nesiqhelo sokuziqhelanisa neenjongo kunye neenjongo zakho.
Kulula ukuphucula ukubetha kweentlobo ezahlukeneyo zokudada ngale app, kunye nokunyusa ibango ngeeseshoni ezinzima okanye ukugcina kufanelekile; I-arena ye-SWIM iza nemithambo eyahlukeneyo ukuze uzisebenzise kwaye uphucule ngokubhukuda.
Unenkqubo ezininzi zoqeqesho zokuphucula ubuchule bakho emanzini, Ngezicwangciso, iinkqubo kunye neeseshoni onokuzikhetha, ngokweemfuno zakho kunye nezinto ozithandayo. Phucula intshukumo yakho kunye nokutyibilika kweziphumo ezingcono kwimidlalo yamanzi. Kukho necandelo leendaba, apho unokufumana amanqaku amaninzi, kubaqeqeshi kunye neendadi. Kwelinye icala kukho icandelo elibizwa ngokuba "luLuhlu lwam" apho ungagcina khona ukusebenza kunye nezicwangciso ozithandayo okanye ofuna ukuziqhelanisa nazo kamva, ngexesha olikhethayo.
Esi sicelo sinamawaka okhuphelo kwiVenkile yokuDlala ye-Android kunye nobunzima obungaphaya kwe-20 MB. Le yeyona nto ibalaseleyo yokufunda nokuphucula ukuqubha, yiyo loo nto sikubandakanya kwesi sithuba sokudibanisa.
Ukuba ufuna ukuphucula indlela yakho yokubhukuda, isixhobo esifanelekileyo sesi isitophuwashi okanye, kule meko, usetyenziso olwenza lo msebenzi kwaye lubaluleke kakhulu ekudadeni njengeSwitch Stopwatch.
Kufuneka ukhethe kwaye uqwalasele le datha ilandelayo: indadi, ubude bechibi kunye nohlobo lovavanyo, ukuba luQeqesho okanye uKhuphiswano. Unokuthelekisa iziphumo zakho zexesha kule app, ukwenzela ukulinganisa inkqubela yakho ngokuthe ngcembe kwaye ubone ukuba ingakanani indlela kwaye ngokukhawuleza kangakanani indlela yakho yokubhukuda iphucula kumadanyana okanye emanzini avulekileyo. Into eluncedo ngokwenene lukhetho lokwabelana namaxesha akho nge-imeyile kunye nezinye iinkqubo, onokuthi wazise abahlobo bakho ngendlela oqhubele phambili ngayo kwisantya nakwezinye iindawo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezi zintandathu zokusebenza zokubhukuda ze-Android
Iindlela ezili-10 eziphezulu zeSpotify kwi-Android